Hay’ada Amoud Foundation oo Qoysaas danyar ah Raashin u qaybisay (Daawo/Sawiro) – Radio Daljir
Hay’ada Amoud Foundation oo Qoysaas danyar ah Raashin u qaybisay (Daawo/Sawiro)
Abriil 26, 2018 9:58 g 0
Hay’ada Amoud Foundation oo fadhigeedu yahay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa 500 oo qoys oo deegaano hoos yimaada Buuhoodle gaarsiisey deeq raashin ah oo hay’adu ugu deeqday dadka danyarta ah ee ku nool gobolka.
Deeqdan raashin ka ah ayaa loogu talagalay qoysaskii sanadkii hore abaarta ku xoola beelay kuwaasoo ku xarooday tuulooyinka.
Tuulooyinka, Tog-barwaaqo, Sool-joogto, iyo Maygaagle ayaa laga soo qaybiyey raashinkan Cabdiwajaab oo ka socdey Hay’ada Amoud Foundation ayaa ku wareejiyey dadka deegaankaasi deeqdan raashinka ah.
“Waxaan anigoo ku hadlaya magaca Hay’ada Amoud foundation runtii aan sidii caadada ahayd halkan aan soo gaarsiiney raashin 500 oo qoys oo maanta odayaasha, waxgaradka iyo muda karkii ku wareejiney”, ayuu yiri Cabdiwajaab.
Isagoo hadalkiisa siiwata ayuu sheegay in Hay’adu sii wadi doonto caawimada ay u fidiso dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Hay’adani ka hawlgasho.
Odayaasha iyo waxgaradka Buuhoodle ayaa u mahadceliyey waxayna codsadeen in loo joogteeyo caawimada noocan ah ee ay u fidiso Hay’ada Amoud foundation.
Nabadoon Cabdiqafaar khatal: “Puntland xaq ayey u leedahay in ay heshiisyo la gasho dowladaha caalamka” (dhegayso)